MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 898
>64 DKBA soldiers dead and 175 wounded last month
>Journal Jo The Geek - Burmese Journal Headlines Digest on 29th April 2009
>Cartoon Beruma – The winner took it all …
> Cartoon Beruma – The winner took it all … September 26th 2008 No tags for this post. Related...
>Aung Way – Oway Poem
> သံပြိုင်ဆို အိုးဝေ လင်္ကာတေး အောင်ဝေး စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ( စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျရေး – တို့အရေး ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေး – တို့အရေး ကြားဖြတ်အစိုးရပေါ်ပေါက်ရေး –...
> ၀ါရှင်တန်မြူချွယ်ဘဏ် (Washington Mutual Bank) ကျရှုံးသွားပြန် နယူးယောက်တိုင်းမ်စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ အမေရိကန်အစိုးရက အရှူံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော ၀ါရှင်တန်မြူချွယ်ဘဏ် Washington Mutual Bank (အတိုခေါ် ၀ါမူ WaMu) ကို...
> သုညမြေ (Ground Zero)မောင်စွမ်းရည်စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ လောင်မီးကျမြေ ပြာပုံမြေကို …ယမ်းမီးသင့်မြေ ဗုံးစာမြေကို …ဇီဝသုဉ်းတဲ့ ဖုန်းဆိုးမြေကို‘မြေသုည’ တဲ့လောကဝေါဟာ တွင်ခဲ့ပါပြီ။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် နံနက်ခင်းဝင်းလက်နေသာမိုးပြာကောင်းကင်၊ ကြည်ကြည်လင်လင်အပြစ်ကင်းစင်၊ လန်းရွှင်ကြည်နူးနယူးယောက်မြို့...
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဂျာနယ်တွေကို တဆင့်ဖော်ပြတော့ ဘာထူးသလဲလို့ မေးပါတယ်။ မှတ်တမ်းရတာပေါ့ဗျာလို့ ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်တွေထဲက မြန်မာတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀ကို...
>Cartoon Beruma – China & Burma on the same boat and share the same fate …
> Cartoon Beruma – China & Burma on the same boat and share the same fate … September 25,...
>Maung Aw – poem
> ပြည်ဖျက်ပိုး မောင်သြ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ (၂ဝဝ၈-ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်သို့) ၁၉၉ဝ. . ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဟာ ပြည်သူ့ ဆန္ဒ အမှန်ပါ. ....
> ရန်ကုန်မြို့လယ် ဗုံးကွဲအပြီးမြင်ကွင်းများ ဓာတ်ပုံသတင်း စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ An injured person is evacuated inapick up truck at the...
>Bomb blast in Rangoon near bus stop at city hall
> မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ကားမှတ်တိုင်တွင် ဗုံးပေါက်၊ လူ ၈ ဦးခန့် ထိခိုက် မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ယနေ့မနက် ၁၀ နာရီ ၃၅ ခန့်က...
>Nyunt Htwe – One Look is Good Enough
> မိုးမခ အတင်း – (တချက်လေး စောင်းငဲ့ကြည့်ဦး) ညွန့်ထွေး စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးနေချိန်မှာ နေပြည်တော်ကတော့ ပင်ဂွင်းမြို့တော်ကြီး ဖြစ်နေပြီပေါ့ အကိုတို့ရေ … ။ အခု...
>MoeMaKa Radio – 24th Sept 2008
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် နာဂစ်ရန်ပုံငွေ ရှာပေးမည့် ဘရာဇီး ဘောလုံးအသင်း၊ ကျော်ဟိန်း၏ နှုတ်ဆက်ခရီးစဉ် နောက်ဆက်တွဲ၊ အခမဲ့ ရနိုင်သော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပညာပေး...
>ORatha – Best Regards to U Win Tin
> ORatha – Best Regards to U Win Tin September 24th, 2009 No tags for this post. Related posts...
>Cartoon Beruma – Life outside Burma is Normal Human Life?
> Cartoon Beruma – Life outside Burma is Normal Human Life? September 24, 2008 No tags for this post....
> ရဲရင့်ငှက် သို့ သြရသ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ပဲ့ စင် အောင်လံ တောင်ပံ သွေးစက် ပျံတက် မိုးဆီ တေးသီ ငြိမ်းချမ်း ကမ္ဘာလွှမ်းဖို့ ရဲရင့်ငှက်တို့ လာချေပြီ။...
>Moe Choe Tin – Best regards to U Win Tin
> အကျဉ်းထောင်က အလင်းရောင် မိုးချိုသင်း စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ဒီနေ့ စက်တာဘာ ၂၃ ရက်နေ့မှာ သတင်းစာဆရာကြီး ဘဘ ဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် ဒေါက်တာ မေ၀င်းမြင့်၊ ဦးအောင်စိုးမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊...
> (sketch: Heinn Htet, photo: Amnesty International) ယမန်နေ့ကပြန်လွတ်လာသော ဦးဝင်းထိန် ကသာထောင်သို့ ပြန်ပို့ခံရဓာတ်ပုံသတင်းစက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ၁၉ နှစ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယမန်နေ့က လွတ်မြောက်လာသော...
> (photo: wikimyanmar dot org ) နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၇)သခင်အသင်းကို စတင်ခဲ့သော ဆရာကြီး သခင်ဘသောင်းထိန်လင်းစက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို ပြန်လည် လေ့လာမယ် ဆိုရင်...
>U Win Tin with MoeMaKa
> ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားတိုထွာ မိုးမခ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ အကျဉ်းထောင်က ထွက်လာသူ ဦးဝင်းတင်ကို မိုးမခက ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ မိုးမခ – ဆရာဦးဝင်းတင်ပါလား...
>U Win Tin rejects SPDC road map
> ဦးဝင်းတင်၏ အင်တာဗျူးများကို http://uwintin.blogspot.com/ တွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဦးဝင်းတင်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်တဦးဖြစ်သူ စာရေးဆရာ မောင်မိုးသူ (photo: Mizzima) နေပြည်တော်၏လမ်းပြမြေပုံ ဦးဝင်းတင် ပယ်ချ မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ စက်တင်ဘာ ၂၃၊...
> ဦးဝင်းတင် (၁၉၃ဝ – ) ၁။ အမည် – ဦးဝင်းတင်၊ ၂။ အဖအမည် – ဦးပု၊ ၃။ အမိအမည် – ဒေါ်အမာ၊ ၄။ မွေးသက္ကရာဇ်...
>BBC interview with U Win Tin
> “အင်န်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရပ်တည်ချက် ကောင်းတယ်၊ မှန်တယ်” ၁၉ နှစ်ကျော် အကျဉ်းကျခဲ့သူ ဦးဝင်းတင် နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ဘီဘီစီ (မြန်မာဌာန) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ဦးဝင်းတင် – ကျနော်အခုလွတ်လာတယ်...
>Moe Choi Thin – Today Last Year
> မနှစ်တုန်းက ဒီအချိန်ဆို.. မိုးချိုသင်း စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ဒီနေ့ အိမ်နားက Kaiser ဆေးရုံမှာ ထိုးဆေးကုန်နေလို့ ဆေးသွားယူတော့ ဒီဆေးရုံကြီးဆီကို အမေရိကားရောက်တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်း မြောက်မြားစွာ...
> ဦးဝင်းတင် လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက် မောင်စွမ်းရည်က ၀မ်းသာကြောင်း စကားအမှာပါး မိုးမခ စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ စစ်အစိုးရက မတရားဖမ်းဆီးထားသော စာနယ်ဇင်းဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် လွတ်မြောက်လာသည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ရောက် မိတ်ဆွေကြီး မောင်စွမ်းရည်က...
>U Win Tin in blue prison uniform
> ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ ဒီအ၀တ်အစားနဲ့ ထွက်လာတယ် ဓာတ်ပုံသတင်း စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ (photos: AFP, AP & Reuters) ယနေ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ထောင်သက်တမ်း အရှည်ဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား...
>U Win Tin & some Political Prisoners released
> ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော ဦးဝင်းတင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံနေစဉ်။ (photo: AFP) စာနယ်ဇင်းဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့ကို စစ်အစိုးရက လွှတ်ပေး မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က...
>Burmese Junta released 9002 prisoners in prisons from their sentences
> စစ်အစိုးရက ပြစ်ဒဏ်ကျ အကျဉ်းသား ၉၀၀၂ ဦးကို လွှတ်ပေး ဓာတ်ပုံသတင်း စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ထုတ်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရစဉ် No tags for this post....
>Saffron Revolution Remembered – One Year Later
> Artist Ko Myoe – Saffron Revolution Remembered – One Year LaterSeptember 22, 2008 No tags for this post....
>Cartoon Beruma – Thanks But No Thanks to UN
> Cartoon Beruma – Thanks But No Thanks to UN September 22, 2008 No tags for this post. Related...
> ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး ပညာပေးကာတွန်းများနဲ့ မှတ်စုဗလာစာအုပ် အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ဖြန့်၊ ကာတွန်း အော်ပီကျယ် လက်ရာများဖြင့် အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းချင်စဖွယ် ဖြစ် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈...
> အကြင်နာရင်ခွင် ဖန်တီးရှင် ဈေးရောင်းပွဲတော် က နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ခိုကိုးရမဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် လှူဒါန်း မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ဖရီးမောင်မြို့တွင် ရတနာ့ဂုဏ်ရည် လူငယ်များအဖွဲ့က...
Page 898 of 944«1...896897898899900...944»